Ny gastr gastrikan'i Mexico | Vaovao momba ny dia
Sary | Sekolin'ny mpitantana kolotsaina sy mpanentana
Raha resaka sakafo dia misy ohabolana Meksikana milaza fa "kibo feno, fo falifaly." Tsy maninona na dia misakafo ao amin'ny trano fisakafoanana mihaja aza isika, eo amin'ny sisin'ny taco eo an-jorony na any an-tranon'ny namana, na aiza na aiza ary, na izany na tsy izany, ny Meksikana dia mahay mankafy sakafo nentim-paharazana tsara. Raha ny marina dia tena matsiro sy ankafizin'ny olona erak'izao tontolo izao ka tamin'ny volana novambra 2010 dia neken'ny UNESCO ho lova tsy azo tsapain-tanana an'ny zanak'olombelona. Ary inona izany no mampiavaka ny gastr gastrikan'ny Meksikana? Eny, izany miavaka mikasika ny lovia izany. "Ny masiaka" na "masiaka" holazain'ny Meksikana.
Manaraka izany, averinay jerena ny tsara indrindra amin'ny gastrolojia Meksikana ary miditra ao an-dakozia izahay.
1 Ny niandohan'ny nahandro Meksikana
2 Mampiavaka ny nahandro Meksikana
3 Sakay, tsaramaso ary katsaka
4 Lovia mahazatra any Mexico
4.4 Mofomamy maty an-drano
5 Zava-pisotro mahazatra any Mexico
5.3 Rano madio
Ny niandohan'ny nahandro Meksikana
Izy io dia iray amin'ireo tranainy indrindra hatramin'ny niandohany 10.000 taona lasa, tamin'ny fotoana nanombohana katsaka mba hahatonga azy io ho fihinanan'ny vahoaka Mesoamerikana. Ny vondrom-piarahamonina indizeny nonina ny faritany dia nanana legioma, sakay ary katsaka ho sakafo fihinanan'izy ireo, na dia natambatry ny hafa tsy dia misy dikany loatra toy ny voatabia, zavokà, kaktus, voatavo, kakao na lavanila ireo sakafo ireo.
Tamin'ny fotoana nahitana an'i Amerika dia nampiana fangaro vaovao ho an'ny sakafo Meksikana toy ny karaoty, epinara, vary, varimbazaha, oats, pitipoà na karazana hena samihafa avy amin'ny biby avy any Eropa toa ny henan-kisoa.
Io fifangaroana io dia niteraka ny iray amin'ireo gastronomie manankarena indrindra eto an-tany izay nanaparitaka ny fiantraikany tamin'ny faritra maro eto an-tany. Androany na ny sakafo Meksikana aza dia antony iray fitsangatsanganan'ny mpizahatany amin'ny fizahantany gastronomika. Mpandeha maro no mankany Mexico mba hahafantatra ny pozole tena izy, ny cochinita pibil, ny mole poblano, ny enchilada, ny sakay fenoina, ny zanak'osy na ny mofo amboakely.
Mampiavaka ny nahandro Meksikana
Ny karazana lovia dia iray amin'ireo toetra mampiavaka ny sakafo Mexico. Saika ny fombam-panjakana dia samy manana ny fomban-drazana gastronomika sy ny fomba fahandro azy, fa ny anarana iraisana dia ny tsaramaso, katsaka, sakay ary voatabia.
Ny mampiavaka ny gastr gastrikan'ny Meksikana dia ny tsy anavahan'izy ireo manavaka ny sakafo isan'andro sy ny haute haute.
Matetika misy lovia fety toy ny tamales, mole na taco izay azo lanina isan'andro amin'ny taona.
Ny nahandro Meksikana dia vokatry ny fihenan'ny kolontsaina ary ao anatiny no ahafahanao mankasitraka ny fahitana ananan'ireo Meksikana an'izao tontolo izao.
Sakay, tsaramaso ary katsaka
Ny sakay dia ampahany amin'ny sakafo Meksikana isan'andro, ka mahatonga azy io ho mpitsangatsangana amin'ny gastronomika ho an'ny vahiny, satria gaga izy ireo amin'ny saosy isan-karazany sy ny fiovaovana isan-karazany omen'ity fangaro ity ho an'ny lovia.
Raha ny tsaramaso, dia efa namboarina ho haingo isaky ny sakafo izy ireo. Saingy ny mpanentana lehibe indrindra amin'ny gastronomika mexico dia, tsy isalasalana, ny katsaka amin'ny endriny samihafa: enchilada, chilaquile, taco ... raha tsy misy an'io sakafo io dia tsy hisy hitovizany amin'ny sakafo Meksikana.
Lovia mahazatra any Mexico
barbecue mexican tena izy, carnitas ary Taco akoho
Io no lovia be solontena indrindra amin'ny gastr gastrikan'i Mexico. Miorina amin'ny tortilla katsaka izay aidino ny famenoana isan-karazany toy ny hena, saosy, fofona sns. Matetika izy ireo dia aroso mivalona amin'ny takelaka fisaka ary miankina amin'ny faritra ao amin'ny firenena ny fanomanana azy ireo.
Ity dia lovia masiaka vita amin'ny chips tortilla nopetahany saosy sakay ary ampiarahina amin'ny tongolo, fromazy, chorizo ​​na akoho, ankoatry ny hafa. Ny sakila dia matetika no sakafo maraina an'ny Meksikana maro.
Izy io dia karazana lasopy vita amin'ny voa katsaka izay anampiana henan-kisoa na akoho. Ireo akora misy ny pozole dia miankina betsaka amin'ny faritra nandrahoina azy ary mety ahitana salady, tongolo, laisoa, fromazy, zavokà, sakay, oregano, sns. Aroso anaty lovia io lovia io.
Mofomamy maty an-drano
Sakafo Jalisco mahazatra io ary raisina ho tanan'ny olomasina hiady amin'ny hangover. Ny fototry ny mofomamy maty an-drano dia ny birote (mofo crusty, volamena ary nendasina) izay feno hena ary naparitaka saosy sakay mafana. Asiana saosy voatabia, tongolo gasy, komina, tongolo na vinaingitra koa.
Tany am-piandohana tao amin'ny efitrano malalaky ny viceroyalty tany Zamora (Hidalgo, Michoacán), tsindrin-tsakafo tsotra nefa matsiro vita amin'ny kanelina, ronono curdled ary siramamy ny chongos.
Taloha, ity tsindrin-tsakafo Meksikana mahazatra ity dia ampahany amin'ny sakafon'ireo vazimba ary nampiasaina ho tsindrin-tsakafo sy ho fifanakalozana. Izy io dia vita amin'ny voa amaranth, voaloboka ary tantely.
Izy ireo koa dia mampiavaka ny sakafo Meksikana ary omena siramamy, voanjo voatetika, rano, margarine ary menaka legioma.
Zava-pisotro mahazatra any Mexico
Tequila, zava-pisotro manan-danja any Mexico
Ny iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra amin'ny kolotsaina Meksikana dia ny gastr gastrie ary ao anatin'io tontolon'ny lamba sy loko ary tsiro ary zava-pisotro mahafinaritra io. Misy ny alikaola, mamy, mamelombelona, ​​masiaka ary tsy misy alikaola kely akory. Farany, ny karazany dia lehibe toa ny firenena ihany.
Io no zava-pisotro malaza indrindra eran'izao tontolo izao any Mexico ary nanjary iray amin'ireo masoivoho lehibe amin'ny kolontsaina Meksikana.
Nanomboka novokarina teo antenatenan'ny taonjato fahafito ambin'ny folo ary ny fizotran'ny famokarana dia mahaliana toa ny tsirony. Tequila dia azo avy amin'ny fermentation miaraka amin'ny masirasira sy ny fanadiovana ranom-boankazo manga, izay apetraka ao anaty barika hazo.
Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 160 ny marika sy ny fambolena 12 mamokatra azy io, manome fiainana ny iray amin'ireo vokatra meksikana be mpitady indrindra any ivelany. Izay manana ny antokom-piangonana manana ny lazany. Ho fanampin'izany, ny tontolo agave an'ny Jalisco dia nambara ho toerana lova manerantany ary noho izany dia nampiroborobo ny zotra Tequila tamin'ny alàlan'ny toerana samihafa mamokatra azy., izay manana tranombakoka momba ny tantaran'ity fisotroana ity, ny fivoarany ary ny famokarany.
I Michelada dia fomba Meksikana iray tokoa hankafizanao labiera mangatsiaka misy ranomandry, tabasco, voasarimakirana ary akora hafa izay miara-manandrana matsiro. Any Amerika Latina, michelada dia zava-pisotro be mpitia ary matetika no amboarina amin'ny labiera eo an-toerana.
Via | Backstreets mahandro sakafo
Ny toetrandro mafana any amin'ny faritra sasany ao amin'ny firenena dia nahatonga ny rano velona ho zava-pisotro malaza tsy misy alikaola. Izy ireo dia vita amin'ny voa voankazo sy siramamy ka mamy. Ny malaza indrindra dia ireo voaomana avy amin'ny chia, hibiscus, tamarind ary horchata.
Raha voa voajanahary ny chia, ny voankazo hafa dia avy amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao toa an'i Afrika, India ary Espana. Na izany aza, ny fomba fanomanana sy fanolorana ireo rano velona (amin'ny vera lehibe) dia zavatra mahazatra sy nentim-paharazana any Mexico.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » gastronomy » Ny gastroomy any Meksika